Nyere Cheikh Anta Diop - Afrikhepri Fondation
Mmasị na Cheikh Anta Diop
SEbido abali iri n’aho n’aho 2014. Obu aho iri-abuo na asaa kemgbe nna nna anyi goziri-uru Cheick Anta Diop laghachiri Ka ya. Dịka kwa afọ, anyị ga-echeta ncheta ya, dịka ememe si dị site na afọ ndị ndị mmadụ lere ya dị ka "nna nna gọziri agọzi", na ihe niile pụtara. Mana ụbọchị a pụrụ iche maka anyị kwesịkwara ịbụ ohere maka nyocha nke ọma.
Ebe Wousirè CAD nyere anyị ihe ọmụma ya site na ọrụ ya, ọrụ ya dị iche iche, gịnị ka anyị mere? Ebee ka anyị nọ na nchụso ọgụ ahụ ọ malitere na nke anyị na-ebukarị onwe anyị elu - n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ n'ụzọ na-ezighi ezi - ịbụ ndị na-aga n'ihu (šmsw Diop)?
Anyị ga-anwa n'ụzọ kachasị dị egwu nke ga-esi gafere ọrụ Diop, wepụ nkọwa ya, iji hụ ihe mere o ji dị mkpa ka anyị tinye ya na ya, yana kedu ụzọ ọ bara uru ọ bụghị naanị maka Africa kamakwa ka mmadu nile buru uzo ya. N'ihi na n'ezie, ọrụ nke Cheick Anta Diop ga-atụle dị ka omenala na nkà mmụta sayensị zuru ụwa ọnụ, na ọ bụghị naanị "African".
Nkwukọrịta a ga - adị mkpụmkpụ dịka o kwere mee; nke n'onwe ya bụ mmega ahụ siri ike, n'ihi na otu esi ekwu okwu banyere nwoke a na-enweghị atụ na nnukwu ọrụ ya na ahịrị ole na ole? Ya mere, anyị na-agba ndị na - agụ akwụkwọ anyị ume ka anyị gosipụta nghọta ma ọ bụrụ na ọdịnaya nke nkwukọrịta dị ha obere. Mana opekata mpe, anyị nwere olile anya na nke a ga-agba onye ọ bụla ume imikpu ihe ọmụma ha banyere ọrụ Nna-ukwu site na nyocha nke aka ha, iji ghọtakwuo uru ọ bara.
Ọnye na-bụ Cheick Anta Diop? Anyị agaghị ekwubiga okwu ókè site n'ikwu na ọ bụ otu n'ime ndị ọkà mmụta sayensị kachasị elu nke dịrị ndụ na narị afọ a. Ọ bụ ọkà mmụta n'ọtụtụ mmụta, na nke ahụ dịka usoro agụmakwụkwọ si dị. Cheick Anta Diop so n’ime ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme n’ụwa ole na ole kere akụkọ sayensị banyere akụkọ ntolite ụwa. Maka nke a, ọ mụtara ọtụtụ ihe; ya bu na onwere nzere masta ya na “ike” sayensi na nmekorita mmadu na nke mmadu.
Cheick bụ onye nyere ohere ọ bụghị naanị n'Africa ma ụwa ndị ọzọ ka ọ weghachite ncheta akụkọ ihe mere eme ya, nke mere na nke ikpeazụ ga-amalite usoro mmekọrịta ya.
Cheick Anta Diop bụ onye mere ka a mata akụkọ ihe mere eme nke Africa, kamakwa nke ọdịda anyanwụ, nke Eshia. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ onye mere ka a mata mbido nke ndị Semites, Arab, wdg.
Ọ bụ na 1945 ka CAD kpebiri idegharị akụkọ ihe mere eme nke mmadụ, n'ihi na ọ na-ewute ya. N'ihi na o nwere ike ịghọta n'isi mmalite na echiche agbụrụ, nke mere ka ọ ghara inwe ike ịkọwa akụkọ ebumnuche banyere usoro evolushọn nke ndị niile bi n'ụwa. Ọ bụrịrị ihe na-adịghị ahụ anya na ọ rịbara ama na ụfọdụ ndị mmadụ ji mpako meere onwe ha ahụmihe niile nke butere mmepe nke mmepeanya, na ndị ọzọ - "ndị Afrịka" ọkachasị - nọkwa ka "kwụsịtụrụ n'ime ọchịchịrị.
Ihe oru ya nke edeghari ihe omuma edeputala site na otutu oru di iche iche, nke nke meghere uzo bu “Mba na omenala Negro; site n'oge ochie nke Egypt Negro ruo nsogbu ọdịbendị ojii nke Africa taa ”. Anyị na-atụle ọnụ ọgụgụ niile nke akwụkwọ a, n'ihi na mgbe mgbe, anyị na-ekwu na ọrụ CAD bụ onye na-akọ akụkọ banyere onwe ya, ebe aha aha ya na-egosi na ọ bụ ọrụ a chọrọ.
Ọrụ ndị a, karịsịa “Anteriorities nke Negro mmepeanya; akụkọ ifo ma ọ bụ eziokwu mere eme ” nke dị n'ụzọ a na-azaghachi ná nkwubi okwu mgbe ụfọdụ ọbụna na-eme ihe ike na ọrụ mbụ ya kpaliri, "Ọdịbendị ọdịbendị nke Black Africa", "Precolonial ojii Africa", ihe ndi ozo bu oru nile nke CAD gbaliri iji nye akuko nke onyinye nke ndi ozo nile na usoro omuma nke mmadu. Ọ gbalịrị ihe niile iji nyeghachi Africa ọnọdụ ya nke na-eweta ọ bụghị naanị nke Ndụ, kamakwa nke mmepeanya. N'adịghị ka ihe akwadoro, ọbụna na-akpọ sayensị okirikiri. Nke a na-akọwa, dị ka anyị kwurula, mkpesa ahụ siri ike dakwasịrị ya na nsogbu nkụzi ahụ ọ tara ahụhụ, ọbụna na obodo ya. Nke a emebeghị ka ọchịchọ ya ịkwasa dị ka o kwere omume nyocha nke nchọpụta ya nke na o ji obi ya dum nyochaa onye ọ bụla. Nke a na-agba akaebe ya n'ụzọ doro anya na nkà mmụta sayensị. A pụghị ikwu otu ihe banyere ụfọdụ n'ime ndị nkatọ ya gara aga ma ugbu a.
A chịkọtara otu ọrụ CAD si arụ ọrụ na usoro nyocha ya na multidisciplinary. Whichzọ nke o jiri mee ihe n'ụzọ doro anya n'oge ya na ndị ọkà mmụta ụwa kachasị ukwuu na asụsụ nke asụsụ, Egyptology, wdg. N'oge Cairo Colloquium na 1974. Colloquium nke chọrọ iji chọpụta ndị anyị kwesịrị ịrapara n’etiti ndị Ijipt, na ezinụlọ asụsụ asụsụ ọ ga-ejikọkwa onye Ijipt oge ochie. Nke a bụ ebe ịcheta ebe a na CAD kwupụtara na ọ bụrụ na agbanyeghị atụmanya niile nsonaazụ nke Symposium Cairo adịghị mma, ọ ga-akwụsị ịrụ ọrụ na Egypt oge ochie. Mana ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, mmechi nke ọrụ ya ga-emeri echiche nke ndị bi n'Ijipt oge ochie "Mediterranean, white" na nke "Afro-Asia" ma ọ bụ "Semitic", ọ ga-adị mkpa na UNESCO, nke nwere haziri nzukọ ahụ na-ebute nsonaazụ niile site na ịgbanwe akwụkwọ akwụkwọ nke na-ewere echiche ụgha ochie ya ma nwee mpako agbụrụ; nke enweghị ohere na ngalaba sayensị. Ọ bụ ihe nwute taa ịmara na ọ bụ ezie na ọrụ nke CAD meriri ndị ọzọ n'ọchịchị, a agbanwebeghị akwụkwọ ọgụgụ ahụ, a ka na-ewepụ ọrụ ya na ngalaba agụmakwụkwọ ma ọ na-emegide ya izu nzuzo nke ịgbachi nkịtị. Ya mere, anyị na-akpọ ndị na-agụ akwụkwọ anyị ka ha were nghọta nke akụkọ nke ogbako ahụ kwuru, ka ha wee mata oke ajọ okwukwe nke ụfọdụ ndị na-azọrọ na ha na-akụziri ụmụ mmadụ akụkọ ihe mere eme ya.
Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na taa, na-arụ ọrụ na nkwupụta sayensị, mmadụ na-ekwu maka Ijipt oge ochie dị ka asụsụ "Chamito-Semitic" ma ọ bụ ọbụlagodi "Afro-Asia". Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ngalaba agụmakwụkwọ, mmadụ na-aga n'ihu na-agbasa akụkọ ifo dịka Gris bụ ebe mmepeanya, ọchịchị onye kwuo uche ya, nkà ihe ọmụma, wdg (nke ọrụ ebube Grik; onye kari one mirage Greek). Ọ bụ ihe nwute na ruo taa, anyị anaghị achọpụta n'ụzọ doro anya na n'amaghị ama na ọgụgụ isi mmadụ - n'akụkụ niile - esirila n'akụkụ Africa, n'akụkụ mpaghara South-North. Na nke a n'agbanyeghị ihe sayensị niile CAD nyere.
O doro anya na nnabata nke eziokwu ga-eduga na akwa, caesura na uche nke ndị na-ebuli onwe ha elu maka ihe niile ụmụ mmadụ rụzuru. Mana nke a nwere ike ịba uru naanị, n'ihi na ọ bụ ọnọdụ enweghị ihe ọ bụla maka ime ka mmadụ niile nwee mmekọrịta na akụkọ ntolite ya, ya mere na ya onwe ya. Nke a bụ ihe kpaliri ọrụ nke CAD, ọ bụghịkwa echiche aghụghọ iji "kpalite ndị Africa" ​​site n'ikwu na ha nwere akụkọ ebube dị ebube.
Anyị ji obi anyị niile kwenye na ọbụlagodi taa, ọ bụ mkpali nke CAD kwesịrị ịchị onye ọ bụla chọrọ obi eziokwu na-azọrọ na ya na-agbaso ụzọ Nna-ukwu. Mkpali nke a kwesiri ibu ihe kwesiri ibu mepụta ihe omuma na mpaghara niile (ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba, mmekọrịta ọha na eze, sayensị, wdg), ọ bụghịkwa ihe ọmụma ndị ọzọ na-emeghachi, karịsịa ma ọ bụrụ na ndị nkụzi, ndị agbụrụ, na ndị ọzọ na-enweghị mmasị. Mgbe ahụ ị ghaghị mara ma kesaa ihe omuma ana gburugburu ebe nile, n'ebe nile.
N'ihi ya, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ọtụtụ n'ime ndị na-akpọ onwe ha CAD taa na-eme karịa ịmeghachi ya, kama ime ya; ịmara mepụta ihe omuma. Anyị na-eche na ọ bụrụ na Nna-ukwu ahụ dị ndụ, ọ ga-ewute ya ịhụ ókè ọrụ ya na-emebeghị ka ọ daa mbà.
Ya mere, nke a bụ oku anyị na-eme mmadụ nile šmsw Diop maka ezigbo mmalite, na ịmalite ịrụ ọrụ kama ịmalite ikwughachi okwu nke na-emeghị ka ihe kpatara ya kpatara agha ya niile. N'ihi na n'ime nke a, anyị ga-akwanyere ùgwù ya ùgwù.
Mee ka Ka nke onye nwe anyi zuru ike na udo na nkwekorita nke ndi nna ochie na ndi oru aka, na site na ebe ha di, ka ha gbaa anyi ume ugboro ugboro.
Cheikh Anta Diop: Nwoke na Ọrụ
2 ọhụrụ site na .30,50 XNUMX
1 ejiri site na € 67,10
Zụta € 30,50
Oge emelitere ikpeazụ na Mee 8, 2021 12:00
Garlic: anthelmintic, hypotensive, depurative, ọgwụ na mgbochi
Echiche asaa nke mmadụ
Okwu Mmalite nke Gnosis - Samael Aun Weor (PDF)
Ọmụmụ na yoga nke yoga - Swami Sivananda (PDF)
Laurent Gbagbo na Charles Blé Goudé kwụsịrị ikpe Ụlọikpe Criminal International